Darpan Nepal – जीवनमा यस्ता केही कुरा हुन्छन्, जुन आफ्ना निकटलाई पनि बताउनु हुँदैन
Sep 14, 2018Admin12Intresting fact0Like
जीवनमा यस्ता केही कुरा हुन्छन्, जुन आफ्ना निकटलाई पनि बताउनु हुँदैन।
मेरो नाम सतीश हो । काठमाडौंको बासिन्दा हुँ । सम्पन्न पनि छु । अहिले ४७ वर्षको भएँ । यो उमेरसम्म आइपुग्दा मेरो अनौठो अनुभव छ । त्यो के भने मसँग लामो समय मानिस संगत गर्न चाहँदैनन् । रुप, गुण, सम्पन्नता भएर पनि किन मानिसहरुसँग लामो सम्बन्ध कायम रहँदैन ?
गुण भन्नुस् वा अवगुण, म खुल्ला छु । मित्रता भएपछि घर–परिवारका मात्र होइन, आफ्ना अन्तरंग कुराकानी पनि गर्छु । श्रीमतीका अनुसार मेरो यही अति खुल्लापनले नै मेरा साथीसँगीसँग लामो सम्बन्ध कायम नभएको हो । के यो सत्य हो ? मानिसले आफ्ना निकटसँग कुन–कुन कुरा भन्न हुन्छ, कुन भन्नुहुन्न ?
तपाईंको मन सफा छ । सबै कुरा आफ्ना साथीहरुसँग भन्नुको अर्थ हो, तपाईंसँग लुकाउनुपर्ने कुरा पनि धेरै छैनन् । अथवा, लुकाउनुपर्ने कुरा छैन भन्ने ठान्नुहुन्छ । यो आफैंमा राम्रो कुरा हो ।
तर, जीवनमा यस्ता केही कुरा हुन्छन्, जुन आफ्ना निकटलाई पनि बताउनु हुँदैन । कतिसम्म भने कतिपय कुरा आफ्नी श्रीमतीसँग पनि गर्नुहुँदैन भने कतिपय कुरा आमा–बुवासँग पनि लुकाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । मित्रहरु भनेका आमा–बुवा र श्रीमतीभन्दा अझै टाढाका हुन् । हाम्रा शास्त्रहरुले पनि यी कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
सतीशजी, आजको समाज व्यावसायिक समाज हो । जतिसुकै निकट सम्बन्धमा पनि केही न केही स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ । यही कारण स्वार्थ बाझ्ने कुनै पनि कुरा निकटतमसँग गर्नुहुँदैन ।
मानौं, तपाईं कुनै युवतीको रुपलाई मनपराउनु हुन्छ । तर, घरमा श्रीमती हुनुहुन्छ भने कुनै बाहिरी युवतीको रुपको वर्णन गर्न थाल्दा समस्या आउँछ । चाहे त्यो सौन्दर्यका विषयमा कुनै लगाव होस् अथवा नहोस् ।
यही कारण केही विशेष कुरा बाहिरी व्यक्तिलाई नभन्नु नै हितकर हुन्छन् ।
गोप्य राख्नुपर्ने ५ कुरा
क) तपाईंको निकट मित्रहरुलाई पनि श्रीमान्–श्रीमतीबीचको खिचातानी, झगडा र यौनका समस्याहरु बताउनुहुँदैन । ठूलो समस्या आएको अवस्थामा मनोविज्ञ वा परिवारका विश्वासयोग्य व्यक्तिसँग कुरा गर्न सकिन्छ । तर, स–साना कुरा सबैसँग बताउँदा यसले चाँडै तपाईंका मित्र टाढिएको महसुस गर्नुहुनेछ ।
ख) माथि नै भनियो, आजको युग व्यावसायिक युग हो । आफ्नो व्यवशाय चलाउन विभिन्न समस्यामा हामी परिरहेका हुन्छौं । धेरै व्यक्तिसँग र बैंकसँग पनि ऋण लिएका हुन सक्छौं । आफूले लिएको ऋण, आफूलाई परेको आर्थिक समस्या वा आर्थिक अभावले आफूले मार्नुपरेका इच्छाहरुका बारेमा पनि बाहिरी व्यक्तिलाई भनिहाल्नुहुँदैन ।
मानौं, तपाईंले पाँच जनासँग ऋण लिएर कुनै कारोबार गरिरहनुभएको छ भने आफ्ना ती ऋणीहरुमध्ये कसैलाई पनि अरु चार जनासँग आफूले ऋण लिएको कुरा आवश्यक नभएसम्म बताउनुहुँदैन । बाहिरी व्यक्तिलाई आफू ऋणमा डुबेको कुरा आवश्यक अवस्थामा बाहेक थाहा दिनुहुँदैन ।
ग) हरेक मानिसले जीवनमा राम्रो काम गरेको हुन्छ । कसैप्रति सहयोग गर्नु मानव धर्म हो । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सबैले केही न केही पुण्यको काम गरिरहेका हुन्छन् । तर, आफूले गरेका सहयोग, दान वा उद्धारका कुरा आफूले नै गर्ने व्यक्तिलाई उति राम्रो मानिस मानिँदैन । त्यस्ता कुरा अरुले गरिदिनु राम्रो हुन्छ ।
घ) आजको युगमा तपाईं एक्लो केही होइन । तपाईं कति ठूलो व्यक्ति भन्ने कुराको मापन तपाईंका पछाडि कति व्यक्ति छन् र कस्ता व्यक्ति छन् भन्ने कुराले मापन गर्छन् ।
तपाईंका पछाडि जति ठूला मानिएका व्यक्ति जति धेरै छन्, तपाईं त्यति नै सम्मानित व्यक्ति मानिनुहुन्छ । तर, तपाईंका पछाडि रहेका व्यक्तिसँग भएका मनमुटाव, समस्या वा झगडाका विषयमा बाहिरी व्यक्तिलाई भन्नुभयो भने तपाईंको महत्व घट्न शुरु हुन्छ ।
आफ्ना मानिससँग सधैं राम्रो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने छैन, तर त्यो सम्बन्धका विषयमा बाहिर कुन रुपमा सम्वद्र्धन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईंको व्यक्तित्व बढ्ने गर्छ ।
ङ) मानिस जति सफल हुन्छ, त्यति नै राम्रा गुण ऊसँग हुन्छ भन्ने आम धारणा हुन्छ । यही कारण कतिपय अवस्थामा तपाईंले सार्वजनिक जीवनमा धेरै कुराको गोपनीयता राख्नुपर्छ ।
हरेक मानिसका धेरै अवगुण हुन्छन् । मानिस जति सफल भयो, उसले आफ्ना अवगुणलाई चिनेर त्यसलाई सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्नु हुँदैन । विशेषगरी, केही विश्वासी व्यक्तिले तपाईंमा भएका गुण देखेर निकट भएका हुन्छन् । उनीहरु जुन कारणले निकट भएका हुन्छन्, त्यही विषयमा आफ्ना कमजोरी देखाउनुभयो भने यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
सतीशजी, तपाईंमा यी समस्या छन् कि छैनन् त्यसबारे विचार गरेर मानिससँग व्यवहार गर्नुभयो भने सम्बन्धमा सुधार आउन सक्छ ।online news बाट साभार
Previous Postभारतले सिमाना मिच्दै गर्दा सशस्त्र प्रहरीले चाल्यो नेपाली भुमि रक्षा गर्न यस्तो कदम…….(हेर्नुहोस् पुरा बिवरण) Next Postग्यास्ट्रिकको उपचार अब आफैँ गर्न सकिन्छ, यस्ता छन् उपचार विधि- शेयर गर्न नभुल्नुहोला!!